Home News Dowladda Sucuudiga oo ugu danbeyn ogolaatay shirkadahii dowladda federaalka ay wadatay
Dowladda Sucuudiga oo ugu danbeyn ogolaatay shirkadahii dowladda federaalka ay wadatay
Dowladda Sucuudiga aya ugu danbeyn ogolaatay in ay qaadaan xujeyda sanadkan shan shirkood oo ka socda dalka Soomaaliya. Dowladda Sucuudiga aya diiday markii hore in ay seddexda shirkadood ee kala ay qaadaan xujeyda maadaama aanay soo buuxin shuruudihii looga baahna.
RW Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo aya ku adkeystay in shanta shirkadoodba ay qaadayaan xujeyda haddii aanay taa dhicina ay labada kale qaadi doonin xujeyda sanadkan oo ay dowladda Soomaaliya kala noqoneyso ruqsada ay heystaan shirkadaha Daalo airlines iyo Jubba airways.
Dowladda sucuudiga aya caawa ogolaatay isla markaana siisay waraaqadihii ruqsadda ay ku keeni lahaayeen xujeyda. MOL oo heshay oo heshay nuqul ka mid ah kaararkii loo sameeyay seddexda shirkadood oo kala ah. Freedom, Afrika Express iyo Ocean airlines.
Seddexda shirkadood aya loo ogolaaday in ay qaadaan boqolkiiba 30 xujeyda halka Jubba iyo Daalo loo ogolaaday in aay qaadaan boqolkiiba 70. Dowladda Soomaaliya aya damiin ka ah seddexda diyaaradood oo haddii la kulmaan ganaax ama arrimo rabbaani ah ay magdhawga iyo masuuliyadaba ay qaadi doonto dowladda Soomaaliya.
Seddexda shirkadood laba ka mid ah Ocean iyo Freedom aya waxaa saami ku leh agaasimaha madaxtooyada Fahad Yaasiin, wasiirka qorsheynta Jamal Maxamed Xasan, Cabdikariin Gaambe agaasimaha hotel Jazeera.
Dowladda Soomaaliya aya lagu wadaa in ay soo celiso shirkadda diyaaradaha Somali Airlines bisha Oktoober ee sanadkan iyadoo ay afar diyaaradood ay ka heli doonto dalka Qatar, waxaana saamiga shirkadda uu noqon doona in %30 ay qaataan ganacsato u dhashay dalka Qatar, halka %30 uu qaadan doono shirkad uu leeyahay Fahad Yaasiin %40 ay lahaan doonto Dowladda Soomaaliya. Siyaad Maxamud Shire aya lagu wadaa in loo magacaabo maareeyaha shirkadda Somali Airlines dhammaadka sanadkan 2018.
Previous articleRW Kheyre oo Shirkii Golaha Wasiiradda maanta ka soo saaray go’aano u muuqda in ay ka soo horjeedaan talaabadii MW Farmaajo
Next articleMid ka mid ah Safiiro ay Magacaawday Dowladda oo Hargeeysa ku sugan(Maxaa laga Filan Karaa??)